Madaxweyne Gaas Oo Difaacay Imaaraadka Carabta
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Cabduweli Maxamed Cali Gaas oo shir Jaraa’id ku qabtay Xerada Ciidamada Badda Puntland ee M/Boosaaso ayaa ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya Imaaraadka iyo Soomaaliya iyo sidoo kale Ciidamadii ay maamulkaas u tababartay.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in labada dal uu ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah,isla markaana sidoo kale Puntland ay waxbadan uu u qabatay Imaaraadka Carabta,isaga oo tusaalo u soo qaatay ciidamada Badda Puntland ee uu tababaray Imaaraadka iyo mashaariicda uu ka fuliyo deegaannada Puntland.
“Runtii xiriirka Somaaliya iyo Imaaradka waa mid soo jireen ah oo qoto dheer,ka puntland ahaan Imaaaradka waxbadan ayay u qabteyn sida la-dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish oo weeraro ku soo qaaday Puntland burcad baddeedi weey yaraatay dhinac walba ayay naga taageeraan Imaaraadka,ciidamadii ay noo tababareena ayaa ah kuwo Soomaaliya oo dhan difaacaya,” ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Imaaradka Carabta ay mashaariic horumarineyd ay ka fuliyaan deegaannada Maamulka puntland oo Malaayiin Dollar ay ku bixiso,sidoo kale uu sheegay in aysan jirin cid noola siman Imaaraadka ama u bedeli karta.
Isaga oo sii hadlayay ayuu waxa uu been abuur ku tilmaamay diyaarad qaadi laheyd Saraakiil Imaaraad ah in lagu xayiray Garoonka Diyaaradaha Boosaaso,waxa uuna sheegay in uu ahaa Warkaas mid Baraha Bulshada siqaldan loogu baahiyey.
Askarigii Kismaayo ku Dilay Xaaskiisa Marxuumad Muxubbo oo la xiray
DEG DEG: Ciidamo ka tirsan Dowladda oo Boobay xaruntii Tababarka Imaaraadka ee Muqdisho